အကာအကွယ် Coverall / အထီးကျန်ဝတ်ရုံ
Anti-Static Protective အဝတ်အစား
သူနှင့်အတူအကာအကွယ် Coverall ...
Protective Coverall ကုန်ပစ္စည်းအမည်အားအသုံးပြုခြင်းအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကုန်ပစ္စည်းအမည် - အကာအကွယ်အဖုံးအုပ်ပုံစံ / အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပုံစံ - အဖုံးအုပ်အဖုံး၊ နှစ်ပိုင်းပါအဖုံးဖုံးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁၆၀ (S)၊ ၁၆၅ (M), 170 (L), 175 (XL), 180 (XXL) ) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုဤထုတ်ကုန်တွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ တစ်လုံးတည်းသောအဖုံးနှင့်နှစ်ပိုင်းပါ ၀ တ်စုံ၊ ပါးပျဉ်း၊ အဝတ်အထည်နှင့်ဘောင်းဘီများပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်သည်ပိုးကင်းခြင်း၊ တစ်ခါသုံးခြင်းနှင့် PE film compos နှင့်ချုပ်ထားသည်။
Disposable Isolation Gown ကိုအသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Disposable Isolation Gown အမှတ်တံဆိပ်: SUREZEN ပုံစံ / အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် MODEL: SZ400 အပြာရောင်၊ နောက်ပြန်လှည့်ပုံစံ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - S, M, L ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှု - ထုတ်ကုန်သည်မြုံမှုမရှိ၊ တစ်ခါသုံးနှင့် ၄၃% SMS ရုပ်ရှင် (၁၅ ဂရမ်) ပေါင်းစပ် ၅၇% မပါဝင်သောထည် (20gms) ဖြင့်ချုပ်ထားသည်။ 1. အသွင်အပြင်: coverall ၏အသွင်အပြင်ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်အနာအခမဲ့ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကော်၊ အက်ကွဲခြင်း၊ အပေါက်နှင့်အခြားချို့ယွင်းချက်များကိုခွင့်မပြုပါ။ ချုပ်ရိုး ...
အပူ - တံဆိပ်ခတ်တိပ်နှင့်အတူအကာအကွယ် Coverall
အပူ - တံဆိပ်ခတ်ထားသောတိပ်ဖြင့်အကာအကွယ် coverall ကိုအသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အပူ - တံဆိပ်ခတ်သောတိပ်ခတ်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသော coverall ပုံစံ / အသေးစိတ်အချက်အလက်များပုံစံ - တစ်လုံးတည်း Coverall အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁၆၅ (M), ၁၇၀ (L), 175 (XL), 180 (XXL) ) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုဤထုတ်ကုန်သည်ခြုံငုံ။ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ သူသည်ပါးလွှာသောဖိနပ်၊ ခြေထောက်၊ ခါးနှင့်ခါးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ချုပ်ရိုးကိုအလုံပိတ်သောတိပ်ဖြင့်တံဆိပ်ခတ်ရမည်။ ထုတ်ကုန်မှာတစ်ခါတည်းဖြစ်သည်။
ငြိမ် Static အဝတ်အထည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တွင်အလွန်ကျယ်ဝန်း။ ကျယ် ၀ န်းသောရင်ဘတ်နှင့်ပခုံးများ၊ ထူးကဲသောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက် elastic ခါးထိုးများနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအဘို့ခါးနှင့်လည်ပင်းတွင်ဖုံးကွယ်ထားသောဖုံးများပါရှိသည်။ ဤဆန့်ကျင်ဖက်အဝတ်အစားသည်အလုပ်မည်မျှချောမွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ ကြာရှည်ခံသော်လည်းရှင်သန်နိုင်သောရှင်သန်နိုင်သော Poly-ဝါဂွမ်းသည်မှေးမှိန်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် anti-static တီရှပ်များ၊ Static anti-jackets များ၊ ဆောင်းရာသီဆန့်ကျင်သောအ ၀ တ်အထည်များနှင့်ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းမှအသုံးပြုသောအခြားထုတ်ကုန်များပြုလုပ်သည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်အလွှာသုံးဆင့်စီစစ်ခြင်းကိုခံယူသည်။ အဓိကထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတွင်အရည်များကိုခုခံခြင်း၊ အမှုန်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများအားကာကွယ်နိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အချင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအာမခံသည်။ အလွှာသုံးလွှာပါသောအရည်ပျော်သောအထည် + အထည်အလိပ်မဟုတ်သည့်အထည်ကာကွယ်မှုအဆင့်သည်မြင့်မားသည်။ အလုပ်နှင့်ကျောင်းထွက်သည်၊ အမြဲတမ်းစောင့်နေပါ၊ အထူးနွေရာသီစတိုင်၊ အလင်းရောင်နှင့်အသက်ရှူနိုင်သောမျက်နှာ၊ , အသက်ရှူခြင်းမထားဘူး, ပြားချပ်ချပ်မြင့်မား elastic နားကိုကြိုး, ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်နားကိုတင်းကျပ်ကြဘူး။
N95 mask သည် NIOSH မှအသိအမှတ်ပြုထားသောအမှုန်အကာအကွယ်ပေးသောမျက်နှာဖုံး ၉ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ "N" သည်ရေနံကိုမခံနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ "95" ကိုဆိုလိုသည်အထူးသတ်မှတ်ထားသောအမှုန်အရေအတွက်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ, မျက်နှာဖုံးအတွင်းရှိအမှုန်အာရုံစူးစိုက်မှုမျက်နှာဖုံးအပြင်ဘက်အမှုန်အာရုံစူးစိုက်မှုထက် 95% ကျော်နိမ့်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ၉၅% ၏တန်ဖိုးသည်ပျှမ်းမျှမဟုတ်ဘဲအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ N95 သည်သီးခြားထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါ။ N95 စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီး NIOSH ပြန်လည်သုံးသပ်သရွေ့၎င်းကို N95 mask ဟုခေါ်နိုင်သည်။ N95 ၏အကာအကွယ်အဆင့်ဆိုသည်မှာ NIOSH စံသတ်မှတ်ချက်အရစစ်ဆေးသည့်အခြေအနေများအောက်တွင်၊ မျက်နှာဖုံးစစ်ထုတ်ပစ္စည်းများ၏အဆီဓာတ်မဟုတ်သောအမှုန်များ (ဥပမာဖုန်မှုန့်၊ အက်စစ်အမိုး၊ ဆေးသုတ်သည့်အမိုး၊ သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများစသည်တို့) သို့ထိရောက်သောစစ်ထုတ်ခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်ဆက်စပ်ဝန်ထမ်းများကိုလေကြောင်းချီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများမှကာကွယ်ရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည်အနီးကပ်လျောက်ပတ်စွာတပ်ဆင်ထားသောအလွန်အကာအကွယ်ရှိသောဆေးအကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ အထူးသဖြင့်ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ကုသမှုကာလအတွင်းလေကြောင်းချီထိတွေ့မှုအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ မျက်နှာဖုံး၏မျက်နှာပြင်သည်လေထဲရှိအမှုန်များကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအစက်များ၊ သွေးများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့်အစရှိသည့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ အဆီဓာတ်မဟုတ်သောအမှုန်များ၏စိစစ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၉၅ အထက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော% သည်လေကြောင်းချီရောဂါများအတွက်အသုံးပြုလေ့ရှိသောကိုယ်ပိုင်အကာအကွယ်ပေးသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ တ်သူ၏မျက်နှာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီးတစ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသောမျက်နှာဖုံးများသည်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များကဲ့သို့သောရောဂါပိုးများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ ဆေးရုံ ၀ န်ထမ်းများကလေထုအတွင်းရှိဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်သားများသည်အမှုန်များမှကာကွယ်သည့်မျက်နှာဖုံးများကိုအသုံးပြုရန် WHO ကအကြံပြုသည်။
တစ်ခါသုံးဆေးမျက်နှာဖုံးများကိုပါးစပ်အခေါင်းပေါက်နှင့်နှာခေါင်းလိုင်ခေါင်းများမှမှုန်ရေမွှားကိုပိတ်ဆို့ရန်အသုံးပြုပြီးသာမန်ဆေးဘက် ၀ န်းကျင်တွင်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းရေးသန့်ရှင်းရေး၊ အရည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အိပ်ရာခင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးစသည့်အထွေထွေကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်သို့မဟုတ်သင့်လျော်သောပန်း ၀ တ်မှုန်ကဲ့သို့သောရောဂါပိုးမွှားများမှအပအခြားအမှုန်များ၏ကာကွယ်မှုစသည့်သင့်လျော်သည်။
ဤထုတ်ကုန်သည်သုံးလွှာအလွှာ filter ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အသက်ရှုခြင်းမရှိဘဲဘက်တီးရီးယားအမှုန်များကိုသီးခြားခွဲထုတ်။ မီးခိုးမြူ၊ ဝတ်မှုန်နှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောအရည်အချင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအာမခံသည်။ အလွှာသုံးလွှာပါသောအရည်ပျော်သောအထည် + အထည်အလိပ်မဟုတ်သည့်အထည်ကာကွယ်မှုအဆင့်သည်မြင့်မားသည်။ အလုပ်နှင့်ကျောင်းထွက်သည်၊ အမြဲတမ်းစောင့်နေပါ၊ အထူးနွေရာသီစတိုင်၊ အလင်းရောင်နှင့်အသက်ရှူနိုင်သောမျက်နှာ၊ , အသက်ရှူခြင်းမထားဘူး, ပြားချပ်ချပ်မြင့်မား elastic နားကိုကြိုး, ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်နားကိုတင်းကျပ်ကြဘူး။
Disposable Isolation Shoe Cover အသုံးပြုမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Disposable Isolation Shoe Cover မော်ဒယ် / အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပုံစံ - ပုံမှန်အမျိုးအစား (အပူ - တံဆိပ်ခတ်ခြင်းမရှိသည့်ချုပ်ရိုးများ)၊ အပူ - တံဆိပ်ခတ်သည့်တိပ်အမျိုးအစား (အပူ - တံဆိပ်ခတ်သောတိပ်ဖြင့်ချုပ်ထားသော) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုထုတ်ကုန်သည်ပိုးမ ၀ င်ခြင်း၊ တစ်ခါသုံးခြင်းနှင့် PE film ပေါင်းစပ်မဟုတ်သောအထည် (အဓိကပစ္စည်း) ဖြင့်ချုပ်ထားသည်။ အပူ - တံဆိပ်ခတ်ခြင်းတိပ်အမျိုးအစားအတွက်, ချုပ်ရိုးမြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိနှင့်အတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးအပူ - တံဆိပ်ခတ်တိပ်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ရလိမ့်မည်။ ကုန်ပစ္စည်း P ...
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးအမြတ်အတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားသူအားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်။
Hebei SUREZEN ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ Co. , Ltd.
အခန်း ၂၃၀၃၊ Tower A၊ Fortune အဆောက်အအုံ၊ ၈၆ ကွမ်တန်လမ်း၊ Chang'an ခရိုင်၊ Shijiazhuang City, Hebei ပြည်နယ်။